Belarosia - Avrupa Birliği Gazetesi
Anasayfa » Dünya » Belarosia
Tsy mandehana any amin’ity firenena ity toy ny fizahan-tany feno loza
Ny tontolo izao ny firenena mampidi-doza indrindra dia belarosia
Rehefa tonga ny 10 km miala ny sisin-tany sy ny tsy nahy niala ny lalana, dia any am-ponja sy tsinjaraina. Ny lamandy sy ny mandray
Tsy misy sivily fitsarana misy ny fitsarana miaramila ao belarosia
Ianao dia tany am-ponja nandritra ny 7 andro ary ianareo dia ho tsinjaraina.
Izany no antony Belarosia no manao izany, dia misy ny balafomanga tao ireo sisin-tany, dia misy ny mpandefa bala afomanga izay any ambanin’ny tany, izay tsy mahazo mandeha any amin’ireny faritra ireny, misy ny mpandefa bala afomanga fa dia nadika ho any Eoropa, na eo ambany ny fanaraha-maso ny Rosiana. Maro ny mpizaha tany tsy fantatrao izany. Fa raha izy ireo tratra any amin’ireo faritra ireo ianao, dia ho tsinjaraina.
Be dia be ny belerus sy rosiana mpiasa miaina eto amin’ity faritra voafetra. tena mampidi-doza ny faritany. ianao tsy manana ny zon’ny ianao rehefa voasambotra.